Nagu saabsan – ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໄມ້ອັດ BSY, ເຄື່ອງປອກເປືອກ Veneer, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Veneer, ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໄມ້ອັດ, ເຄື່ອງກົດຮ້ອນ, ເຄື່ອງຕັດໄມ້ອັດ, ເຄື່ອງຕັດໄມ້ອັດ, ເຄື່ອງຕັດກາວ, ເຄື່ອງກົດກ່ອນສໍາລັບໄມ້ອັດ, ເຄື່ອງຕັດຂອບໄມ້ອັດ, ເຄື່ອງກຶງ Veneer Peeling
Xariiqda diirinta ee veneer
Dib u hagaajinta alwaax
Qoryaha loo yaqaan ‘Plywood Sanding’
4 dhinac Qorsheeyaha
» Company Information » Nagu saabsan » Nagu saabsan
Waxaa la aasaasay 1956, Weihai Baishengyuan Industry Co., Ltd. (warshada makiinadaha alwaaxa ee weihai ee asalka ah) waxay ku taal magaalo xeebeedka quruxda badan ee Weihai, Shandong, Shiinaha. Waa cilmi-baaris ururin iyo horumarin, wax-soo-saar, suuq-geyn qalab farsamo oo xirfad leh oo kooxo ganacsi oo waaweyn ah, waxayna leedahay is-maamulid xuquuqaha soo dejinta iyo dhoofinta. Tobannaan sano oo horumarineed ka dib, shirkaddu waxay had iyo jeer ku adkaysanaysaa inay qaado waddada hal-abuurka madaxbannaan, horumarinta sayniska. Hadda ma wax soo saarka ee qalabka wax soo saarka plywood dhamaystiran, alaabta kaabayaal, raacaan baahida suuqa si joogto ah.The alaabta dhoofiyo in ka badan 50 dal iyo gobollada Asia, Europe, Africa iyo America.
Shirkadu waa shirkad heer qaran ah oo tignoolajiyada sare leh, Gudubtay GB/T19001-2016 shahaado nidaamka maaraynta tayada iyo shahaado CE. Waxay leedahay xarunta horumarinta tignoolajiyada ganacsiga gobolka, xarunta cilmi-baarista tiknoolijiyada mishiinada alwaax weyn, Gobolka Shandong “hal shirkad iyo hal technology” xarunta cilmi, xarunta design warshadaha degmada, Weihai Wood-ku salaysan shaybaar guddiga iwm Waxa ay leedahay 23 shatiyada hal-abuurka qaranka, 25 utility. shatiyada moodeelka, oo la faray 10 heer xirfadeed. Shirkaddu waxay ku guulaysatay “Gobolka Shandong Abaalmarinta Saddexaad ee Horumarka Sayniska iyo Tignoolajiyada”, iyadoo marka hore dejisa meelaha diiradda lagu saarayo agabka farsamada ee gobolka Shandong ee mashruuca hal-abuurnimo ee madaxbannaan. Abaalmarinta koowaad ee guulaha la taaban karo ee Hal-abuurka Tiknoolajiyada, “abaalmarinta koowaad ee alaabada cusub ee ugu wanaagsan” “abaalmarinta labaad ee sayniska iyo tignoolajiyada ee warshadaha mishiinada Shiinaha” “abaalmarinta koowaad ee abaalmarinta hal-abuurka ee warshadaha wax soo saarka kaynta Shiinaha iyo abaalmarino kale”. Summada BSY ee khadka diirinta rotary iyo CNC spindleless spindleless lathe ayaa loo aqoonsaday inay yihiin alaab caan ah oo caan ka ah Gobolka Shandong.
Shirkaddu waa xubin madaxweyne-ku-xigeenka xubin ka ah Ururka Mashiinnada Kaymaha ee Shiinaha iyo unugga maamulka ee ururka mishiinnada Shiinaha, cutubka agaasimaha isbahaysiga cusub ee warshadaha qalabka kaynta, cutubyada xubnaha ururka warshadaha qalabka-dhamaadka sare ee Shandong, Shiinaha warshadaha qalabka alwaax warshadaha “Tobanka sare” shirkadaha hal-abuurka madax-bannaan, dufcadii ugu horreysay ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah “horyaal qarsoon” ee Gobolka Shandong.
BSY waxay siisaa mashiino kala duwan oo ay ku jiraan warshad alwaax ah, log debarker, lakabka wareegta wareega ee hal-dhabarta leh, saxarada wareega oo aan ka yarayn, qalajiyaha veneer, saxaarad alwaax ah, alwaax cidhifeedka Trimmer, plywood Sander iwm.
Adeegga iyo tabobarka waxa lagu bixiyaa shaqaalaha sida xirfadaysan u tababaran ee ganacsatada BSY, ama si toos ah iyada oo loo sii marayo farsamayaqaannada adeegga ee shirkadda.
Hadafkayagu wuxuu had iyo jeer ahaa inaan bixino oo keliya qalabka iyo adeegyada ugu tayada sarreeya. Mar labaad, ku soo dhawoow Kooxda Warshadaha BSY. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo aan laga helin degelkan, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho.